Somaliland: Ruushka ma u gali kartaa booskii Sudan iyo qorshihiisii hirgelinta saldhig ciidamo baddeed?
Home WARARKA Somaliland: Ruushka ma u gali kartaa booskii Sudan iyo qorshihiisii hirgelinta saldhig...
Waxa sidan lagu qoray mareegta caanka ah ee lagaga faalloodo arrimaha siyaasadda ee Modern Diplomacy. Maqaalka ayaa lagu lafa-guray is beddel ku yimi qorshihii Ruushku kaga dhisan lahaa Suudaan saldhig ciidamo badeed ka dib mad-madow soo kala dhex galay labada dal iyada oo Suudaan waqtiyadii dambe u janjeedhsatay dhinaca Reer Galbeedka.
“Suudaan ayaa qirtay salaasadii hore in ay dib u eegis ku samaynayso heshiiskii sannadkii hore ee Ruushku kaga samaysan lahaa Suudaan saldhig badda ah, lagana yaabo in meesha laga saaro heshiiska. Hogaanka Guud ee Ciidamada Talada haya Maxamed Cismaan Xuseen ayaa shaaciyey arrinkan isaga oo la hadlaya Warbaahinta Bue Nile TV isaga oo yidhi: “dhukumantiyada heshiiska qaarkood ayaa halis toos ah u soo jiidaya Suudaan” waxa uu sheegay in aan heshiiska sharci dajintu ansixin oo aanu heshiisku weli haysan sharci uu ku hawlgalo. Waxa kale oo hogaanka ciidanku dafiray in go’aanka Suudaan ku qotomo raalli gelinta Maraykanka”.
Maqaalka oo intaas ka dib lafa guray sida ay suurogal u tahay in Ruushku saldhig ka samaysto Somaliland ayaa lagu qoray: “haddii ba qorshaha Ruushka ee Suudaan guul-darraysto, waxa hubaal ah in Ruushku ku qasbanyahay in uu aag baddasho weliba si dhokhso ah. Waxa aad loo odorosayaa in Ruushku diraaseeyo faa’idada iyo khasaaraha in uu saldhig la mid ah ka uu ka dhisan lahaa Suudaan ka dhisto Somaliland. Horraantii sannadkii 2018 ayaa warar badan oo la isla dhexmarayay tilmaamayeen in Ruushku damacsanyahay in saldhig ka dhisto magaalo xeebeedda Saylac”.
Maqaalka oo lagu xusay sida Imaaraadku ula sameeyay Somaliland xidhiidho diblumaasiyadeed iyo heshiiskii Imaaraadku kula galay Somaliland in uu saldhig ka samaysto Berbera uu kaga duulo Xuutiyiinta Yemen, ayaa sidoo kale tilmaamay in suuro gal tahay in Ruushkuna sidaas si la mid ah ka samaysto saldhig ciidamo badeed.
Waxa lagu xusay maqaalka sida ayna u suuro-gal u ahayn waddamada gobolka oo Jabuuti ugu horrayso in Ruushku saldhig ka samaysto. Jabuuti ayaa marti galisa saldhigyo waaweyn oo caalami ah oo ay iska soo horjeedaan siyaasadda Ruushka. Sidoo kale waxa lagu sheegay sida Ruushku dano siyaasadeed oo badan uga leedahay Itoobiya, Somaliland na u tahay waddada u wanaagsan ee ku xidhaysa Itoobiya.
Waxaa turjumay: Maxamuud Bulxan
Previous articleUAE inaugurates Israel embassy after normalisation deal
Next articleOgaada Dhallinyaro in aad Tihiin Keydka ugu Qaalisan ee Dalka